China Touch Control Stepless Dimming LED Floor Lamp Manufacturing and Factory |Chaoqun
1.LED jiro vakana toy ny hazavana loharano, tsy misy flicker, fiarovana maso kokoa noho ny jiro incandescent nentim-paharazana, LED 12w mazava tsara mba hanazava ny efitranonao.Mamirapiratra 900-1000 Lumens ny jiro - nefa 12W ihany ny herin'aratra.
2. Temperature telo loko:
6000K-4500K-3000K, fotsy mangatsiatsiaka, fotsy mafana, mavo mafana.Ary ny dimming stepless10% -100% amin'ny fanitsiana ny famirapiratana, mba hanomezana ny filan'ny sehatra isan-karazany. efitrano fandraisam-bahiny mba hahitanao tsara kokoa ny tantaranao, na eo akaikin'ny easel amin'ny fianaranao mba hanazavana ny sarinao.
3. Manana fiainana lava:50000h.Raha ampitahaina amin'ny takamoa mahazatra, ny vakana LED dia tsy mora tapaka ary tsy mila soloina matetika.Na dia ampiasaina nandritra ny fotoana ela dia tsy ho mafana.Ny endrika endrika tsotra, mateza ary tsy lany andro.
4. Nampiasa fanaraha-maso malefaka,fanivanana stepless sy fametrahana fitadidiana.Mora kokoa sy malefaka kokoa ny miasa, ny ankizy sy ny antitra dia afaka miasa mora foana.Touch bokotra dia mangatsiaka fitaovana, na dia rehefa ela ny fampiasana dia tsy ho mafana.
5. Mba hiarovana anao sy ny ankohonanao, dia nametraka fototra mavesatra izahay mba hahatonga ny jiro ho stable kokoa. Ny fototra stable dia tsy mora voadonan'ny ankizy na ny biby fiompy. Rehefa mamboly ahi-dratsy ao an-jaridaina ianao ary mijery ny ankizy TV irery ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, tsy mila miahiahy momba ny hazavana voadona tsy nahy.
Boaty mailaka volontsôkôlà:27.5*29*40.5CM
45.5*29*40.5CM (4pcs / ctn);18Mp
Ny jiro dia azo omena amin'ny famakiana, fanjairana, fanamboarana sns.Afaka handravaka ny efitranonao ihany koa.
teo aloha: Jiro gorodona LED 12W
Manaraka: LED Mamirapiratra 2 amin'ny 1 gorodona sy jiron'ny birao